खाना पस्केको मात्रै थियो । जुठो पनि हालेको थिएन । मुछेर गाँस मुखमा हाल्नै लाग्दा एउटा टिभीमा फ्ल्यास न्युज आयो । ‘सुनकोसीमा बस खस्यो । बसमा सवार सबै बेपत्ता । थप विवरण आउन बाँकी ।’
हिमालय टेलिभिजनबाट फोन आयो ।
‘सुनकोसीमा बस खस्यो रे । अरु टिभीमा फ्ल्यास आइसक्यो, हाम्रोमा खोइ ?’ जिल्ला ब्युरो प्रमुख विश्वनाथ सरकोे फोन ।
‘सर, म फोन गर्दै थिएँ । अफिसको फोन बिजी रहेछ ।’
‘के भयो ? ल, भन्नुस् त ।’
मलाई पनि थप विवरण थाहा थिएन । उही अर्को टिभीमा आएको फ्लास न्युजको आधारमा टिपाएँ, ‘थप विवरण आउन बाँकी ।’
भात मुछेको हात नपखाली फोनमै बिजी भएँ । पहिलो फोन इन्सपेक्टरलाई गरें, लागेन । बिजी नै भन्यो । दोस्रो डीएसपीलाई । लागेन । ट्राफिकलाई गरें । लाग्यो ।
‘हाम्रो टोली घटनास्थलतर्फ जाँदै छ । १० मिनेट पछि गर्नुहोला,’ त्यतिकैमा ट्राफिकका सईले फोन राखे ।
तुरुन्तै मोबाइलमा म्यासेज आयो, ‘योर ब्यालेन्स इज गेटिङ लो । प्लिज रिचार्ज इन टाइम ।’
चुठें । रिचार्ज कार्ड किन्न चोकमा निस्किएँ । फोनको ओइरो छ– कुनै रेडियोबाट, कुनै टिभीबाट र कुनै आफन्तका । पत्रकार साथीलाई थाहा हुन्छ भनेर पत्रिकाको नम्बर हेर्दै फोन गर्न थालें । हैरान भएँ । टिभीबाट फेरि फोन आयो, ‘केही अपडेट छ त ?’
‘म बुझ्दै छु सर ।’
‘११ बजेको समाचारमा तपाईंले टेलिफोन लाइभ दिनुपर्छ । तयार भएर बस्नुहोला ।’
‘हुन्छ सर ।’
‘घटना स्थलबाट तपार्इं कति टाढा हुनुहुन्छ ?’
‘५० किलोमिटर टाढा छु सर ।’
‘जसरी पनि फुटेज पठाउनुपर्छ है ।’
पीसीओ पुग्छु ।
‘रिचार्ज कार्ड छ दाइ ?’
‘केको ? कतिको ?’
‘एनटीसीको १०० को दिनू न ।’
‘म यसको पैसा भोलि दिन्छु है दाइ ।’
‘पहिलाको पनि धेरै छ । छिट्टै गर्नुहोला है ।’
फोन आ’को आ’कै छ, दुनियाँको ।
सौर्य दैनिकबाट रामकुमार एलन दाइको फोन आयो, ‘स्टोरी दाम्मी बनाऊ है, फोटो पनि राम्रो खिच नि ।’
बल्लबल्ल इन्सपेक्टरलाई फोन लाग्यो ।
‘हामी घटनास्थल जाँदै छौं । एकछिन पछि गर्नुहोला नि है !’
ट्राफिकलाई लागेन ।
टिभीबाटै फोन आयो, ‘लाइभ है । स्टुडियोमा सुष्मा ।’
काठमाडौंबाट तातोपानीतर्फ आउँदै गरेको बा२ख २३४५ नम्बरको यात्रु बस अरनिको राजमार्गको कोठे नजिकै दुर्घटना... घटनास्थल नजिकै प्रहरी भए पनि पुगेको छैन । स्थानीयद्वारा उद्धार कार्य जारी । थप विवरण आउन बाँकी ।...पचासभन्दा बढी बेपत्ता भएको हुन सक्ने अनुमान ।
यत्तिकैमा गर्लफ्रेन्डको फोन आउँछ, ‘मान्छे कता हराको हो ? कस्तो निष्ठुरी बन्न सकेको होला ?’
‘म अहिले बिजी छु क्या ।’
‘कोसँग घुम्न गएको होला, अनि,’ उनले फोन काटिदिइन् । टिभीबाट लगातार फोन आइरहेको हुन्छ । त्यत्तिकैमा मोबाइलमा ब्याट्री लो भएर मोबाइल सट डाउन हुन्छ ! अनि परेन फसाद ! साथीको मोबाइल माग्छु ।
‘ब्यालेन्स छैन, मिस कल मात्र गर्नू है !’
हतार हतार टिभी र पत्रिकामा फोन गर्छु, ‘सर, मेरो मोबाइल अफ भयो, यो नम्बरमा फोन गर्नू है ?’
दुर्घटनास्थलसम्म जान कुनै सवारीसाधन छैन । सार्वजनिक बसमा जानुभन्दा नगएकै जित्छ । घटनास्थल जान पनि बस भाडाको सवाल छ । जिप्रकाबाट जाने प्रहरी र सीडीओको गाडीमा लिफ्ट माग्छु ।
‘हाम्रोमा अघि नै प्याक भयो । पछाडि एक जना अट्छ होला, जाने हो ?’
जानै परेपछि के गर्नु ? हतियारसहितको प्रहरी भ्यानको पछाडि बसेर जाँदै गर्दा केही चिनेकाहरू कानेखुसी गरेर भन्दै थिए, ‘पत्रकारले के गरेछ, पुलिसले लग्यो ।’
घटनास्थल पुग्दा तीन वटा शव निकालिएको देखें । एकको सनाखत भएछ, मांखाकी १८ वर्षीया सुन्तली तामाङ ।
दिदीको घरबाट फर्किएकी तामाङलाई बस चढेको केही मिनेट नबित्दै निल्यो सुनकोसीले । उद्धार कार्य जारी थियो । सबैलाई कभर गर्ने गरी एउटा स्टिल फोटो खिच्न क्यामराको लेन्स मात्रै के खोलेको थिएँ, फोन । बुबाले गर्नुभएको रहेछ । भन्नुभो, ‘बस पल्टेछ त हो ?’
‘हो,’ फोन काटिदिएँ ।
एकको उद्धार गरियो । बसको सिटमुनि परेकाले ऊ बाँच्न सफल भएछ । उसले पानी अलि बढी नै खाएछ ।
‘समस्या त्यति हो, अरू केही भएको छैन,’ इन्सपेक्टर डाक्टर बने ।
तैपनि, उसलाई हतार हतार एक्बुलेन्स चढाइयो । रमितेको भीड छिचोल्दै एम्बुलेन्स अस्पतालतर्फ हुइँकियो । पत्रकारहरू पछि लागे ।
मोटरसाइकल हुनेहरू एम्बुलेन्सभन्दा अघि नै अस्पताल पुगिसकेछन् । मैले पनि एक परिचत मान्छेसँग कर गरेर लिफ्ट मागें । अरुभन्दा केही ढिलै भए पनि अस्पताल पुगें । टिभीलाई अपडेट गराएँ । । अस्पताल परिसरको फुटेज लिनै लाग्दा ह्याडीक्याममा क्यासेट सकिन्छ ।
क्यासेट किन्न बजार निस्कन्छु । पर्स रित्तो छ । अर्को टिभीको रिपोर्टरसँग क्यासेट सापटी माग्छु, पाउदिनँ । तर, पैसा सापट पाउँछु । अस्पतालमा एक/दुई सट खिचेपछि घाइतेको स्थितिमा सुधारको खबर आउँछ । केहीबेरमा नै घाइते सामान्य उपचारपछि डिसचार्ज हुन्छ ।
सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्छ, सामान्य घाइते ।
‘ड्राइभरको लापरबाहीले दुर्घटना भएको हो ?’
उसले आफ्नो बुझाइ प्रेसमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो, ‘उताबाट गाडी यता आउँदै थियो । त्यति नै बेला एउटा मोटरसाइकलले साइड माग्यो ।
यताबाट पनि एउटा ट्रिपर उता जाँदै थियो । जबर्जस्त रङ साइडबाट गाडी अघि बढाएकाले दुर्घटना भयो । बसमा करिब ४० यात्रु थिए । सिट फुल भएर १० जना जति उभिएका थिए । म सेकेन्ड लास्ट सिटको ‘बी’ साइडमा बसेको थिएँ । सिटमुनि परेको म, टाउको पानी बाहिर परेर बाँच सफल भएँ । धन्न भाग्य दह्रो रहेछ र मात्रै ।’ यस्तै यस्तै ।
फेरि दुर्घटना स्थलतर्फ । पाँच वटा शव निकालिएछ । दुईको सनाखत पनि भएछ । प्राप्त सबै विवरण, डीएसपीको ‘बाइट’ र स्थानीयको भनाइ लिएर बजार गएँ । एउटा माइक्रोमा क्यासेट पठाएर साइबर छिरें, समाचार लेख्न । सुनकोसीमा बस खस्यो, बसमा सवार ३५ भन्दा बढी बेपत्ता, पाँचको शव फेला, एकको उद्धार ।
समाचार लेख्ने बेला युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघको कित्ताकाँट हुन्छ । एकले अर्कोलाई फोटो र थप जानकारी सेयर गर्दैनन् । यस्तैमा समाचार लेखिसकेपछि बेलुका सदरमुकाम फर्कने चाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
युनियनकाहरू एक ठेकदारको गाडीमा पहिल्यै हिँडिसकेका हुन्छन् । चौतारी र क्रान्तिकारीहरू अलमलमा परिरहेका बेला एक व्यापारीको गाडी आउँछ । चड्छन् बाँकी सबै । फेरि भेट हुन्छ युनियनकाहरूसँग राजमार्ग छेउको रिसोर्टमा । उनीहरूको स्पोन्सर ठेकेदार र हाम्रो स्पोन्सर व्यापारी । कोभन्दा को कम ? जम्छ माहोल, एन्टिक्युटीसँग ।
दिउँसोको घटनाबारे क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ । सहयोग र असहयोगका विषयले चर्काचर्की पनि पर्छ । आखिर साँझ सदरमुकाम अवतरण हुन्छौं । दुवै गाडी र पत्रकारहरू । गाडीबाट झरेर सबै आ–आफ्नो बाटो लाग्छौं । म भने उधारोमा ५ वटा पाइलट चुरोट किनेर बिहानको चोखो भात खान कोठामा जान्छु । सुत्छु ।
करिब पाँच वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दाको अनुभूति हो, यो । अहिले काठमाडौंमा बसेर खबरखेती गरिरहेको छु । त्यहाँको दुःख र यहाँको दुःख फरक छ । तर, दुखाइ एउटै ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १५, २०७६, ०९:५७:००